उपत्यकाका ३ जिल्ला सहित देशभर फेरी थपिए ५२५ सङ्क्रमित, ४ जनाको मृत्यु « गोर्खाली खबर डटकम
उपत्यकाका ३ जिल्ला सहित देशभर फेरी थपिए ५२५ सङ्क्रमित, ४ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण बिहीबार थप ५२५ सङ्क्रमित भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सो कुरा बताएका हुन् ।
योसँगै कुल सङ्क्रमित २४ हजार ९५७ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा नौहजार ८५९ जनाको पीसीआर परीक्षणमा सो सङ्ख्या थपिएको हो । सक्रिय सङ्क्रमित आठहजार २५ जना रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा १४ हजार ७६९ र होम क्वारेन्टिनमा ४६६ जना रहेका छन् । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित भएर उपचारमा रहेका जिल्लाहरू चार वटा रहेका छन् । काठमाडौँ, पर्सा, रौतहट र महोत्तरी रहेका छन् ।
त्यसैगरी, शून्य सङ्क्रमित हुने छ वटा जिल्लाहरू रहेका छन् । सङ्खुवासभा, सोलुखम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला रहेका छन् । यस्तै, बिहीबार एकसय नौजना उपचारपछि घर फर्केका छन् । यसरी अस्पतालबाट उपचारपछि डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या १६ हजार ८३७ पुगेको छ । सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुने ९५ पुगेको छ ।
त्यस्तै उपत्यकाका संक्रमितमा काठमाडौंका १११, ललितपुरका ११ र भक्तपुरका ५ गरी १२७ जना रहेका छन् । योसहित हालसम्म देशभर कुल संक्रमितको संख्या २४ हजार ९५७ पुगेको छ ।पछिल्लो अध्यावधिक विवरणअनुसार १०९ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
त्यस्तै कोरोनाका संक्रमणबाट थप ४ जनाको मृत्यु भएको औपचारिक पुष्टि भएको छ । बिहीबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले थप ४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन् । मृतकमा महोत्तरीका ४५ वर्षीय पुरुष, धनुषाका ८५ वर्षीया महिला, अछामका १८ वर्षीय पुरुष र मोरङका ५७ वर्षीय पुरुष रहेको गौतमले जानकारी दिए । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या ९५ पुगेको छ
यी कारणले नेपाली बजारमा सुनको भाउ लगातार घ’ट्दै, पु’रानोमा झ’र्दै’
मौसमले दियो खतरनाक संकेत ? यि पाँचवटा प्रदेशका लागि महाशाखाको यस्तो चेतावनी
यी १९ बर्षिया युवती जस्ले आफ्नै बुवासँग राखिन् यौ:न सम्बन्ध ! कारण यस्तो रहेछ !